I-Sunsets ~ Indlu Eyohlukileyo YaseLwandle - I-Airbnb
I-Sunsets ~ Indlu Eyohlukileyo YaseLwandle
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguVerina
I-Sunsets yindawo ekhethekileyo Indlu yeholide, enembonakalo emihle yolwandle ejongene ne-Great Oyster Bay, ulwandle lweemayile eziyi-9 kunye nomlomo womlambo weSwanwick.
Le ndlu yaselunxwemeni yeyale mihla yaye iyathandeka, ilungele abantu abathandanayo.
I-Sunsets inomphakathi wale mihla kwaye iyathandeka. Inekhitshi elivulekileyo, indawo yokutyela kunye nendawo yokuphumla ekhokelela kwibhalkoni.
Kukho indawo yomlilo ephandle enokusetyenziswa ebusika, ebekwe kwibala labucala.
Kukho igumbi lokulala elivulekileyo elinebhedi enkulu etofotofo.
Ngebhodi yeplanga entle kunye nezinto zamaplanga zasekuhlaleni kuyo yonke le ndlu, yindawo entle onokuyonwabela ngoxa ulapha e-Freycinet.
I-Sunsets inazo zonke izinto ezifunekayo ukuze ukuhlala kwakho kube tofotofo kuze kungalibaleki.
Ikhitshi negumbi lokuhlambela lelemihla yaye lelemihla ngemihla. Ibhalkhoni yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlala uze uphumle ngekofu okanye ngeglasi yewayini ngoxa ukwindawo entle.
Kukho nenye indawo yokuzonwabisa kunye nomgangatho welanga ngasemva kwendlu egcinwe ngumoya.
Le ndawo yasegadini inomlilo wangaphandle onokusetyenziswa ebusika (ukususela ngoMeyi ukuya kutsho ekupheleni kukaSeptemba) kwaye ilungele ukuhlala kuyo ngoxa ubuka iinkwenkwezi.
Kukho iindawo ezintle zokuloba kunye nolwandle olukhuselekileyo lokuqubha xa uhamba ngeenyawo ukusuka kule ndlu.
I-Sunsets yindawo entle yokufikelela kuzo zonke izinto ezifumaneka kule ndawo. I-Wine Glass Bay, i-Mountylvania, i-Visitor Centre, i-Quad Bike kunye ne-Kayaking tours, ukuhamba ngesikhephe kunye ne-dinghy, ukuhambahamba elwandle okuthandanayo kunye neentlanzi ezifihlakeleyo, i-cafe kunye neendawo zokutyela kunye negalufa ukuzitsho ezimbalwa.
4.63 · Izimvo eziyi-253
Zininzi izinto ezinomtsalane apha eFreycinet. KwiFreycinet National Park unendawo edumileyo yeWineglass Bay kunye nendlu yesibane, unokufumana ulwazi ngokuhamba kunye nokunyukwa kwentaba kulo mmandla kwiofisi yePaki yeSizwe apha eColes Bay.
Kukwakho amava afana nala:
Ukutya okukhethekileyo nokwamkelekileyo kunye nokhenketho lwewayini olubizwa ngokuba yiLong Lunch Tour Co, iWineglass Bay Cruises apho unokujonga iWineglass Bay ngenqanawa.
Ukhenketho lwebhayisekile ye-4WD kunye ne-All4Adventures. UKhenketho lweKayak kunye neFreycinet Adventures.
I-Sail Freycinet yinto ekhethekileyo yokuhamba ngesikhephe.
Iinqwelomoya zeScenic ngeFreycinet Air.
IFama yaseMarine yaseFreycinet apho unokusampula iimbatyisi zasekhaya kunye nescallops
Indawo yokutyela/ikhefi edumileyo "Tombolo", ipizza esemgangathweni eyenziwe ngamaplanga (yeyona ikofu edolophini).
Zininzi iilwandle ezimangalisayo zokuqubha kunye nokuloba, ibala yegalufa kunye nezinye izinto ezinomtsalane kwidolophu elandelayo yaseBicheno (imizuzu engama-25 kuphela kude) apho unokuya khona ngobusuku bePenguin Tours kwaye ubone iTasmanian Devils kwiNature World.
Iwebhusayithi enkulu onokuthi ungene kuyo ukuze ufumane ulwazi oluthe kratya www.wineglassbay.com
Umbuki zindwendwe ngu- Verina
Izimvo eziyi-9 043
Sikushiya ubucala ukuze ukonwabele ukuhlala kwakho, nangona kunjalo sitsalela umnxeba ukuba ufuna naluphi na uncedo.
Inombolo yomthetho: DA 2014/00176
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Coles Bay